Faa'iidada caafimaad ee Baamiyaha (#okra). – Beegsonews-Wararka maanta
Home Caafimaadka Faa’iidada caafimaad ee Baamiyaha (#okra).
Baamiyaha waxaa ku jiro qaybaha kala duwan ee nafaqada wuxu qani ku yahay fiitamiinada kala ah, Vitamin K , Vitamin C, Thiamine (B1) Folate (B9).
Sidoo kale waxaa ku jira macdanta sida : Magnesium, Phosphorus Calcium iyo Zinc.
Wuxuu xoojiyaa lafaha : waxaa ku jiro fitamiin k oo ka qayb qaato samaysanka lafaha isagoo si kiimikaal ah (chemical) u qaabeeyo ama u aktiif (active) gareeyo borotiinada ka qayb qaato dhisida lafaha sida (osteocalcin) sidoo kale waxa kujiro calcium iyo Phosphorus.
wuxu u fiican yahay dadka qabo xanuunka sonkorowga : war bixino caafimaad ayaa sheegaya inuu yareeyo xawaaraha sonkorta looga soo nuugo dheef-shiidka (low Glycemic Index) taasina ay saacidayso in sonkorta dhiigga aysan aad ukicin.
caafimaadka hooyada uurka leh : baamiyaha waxaa ku jiro fitaamiinka Folate (folic acid) oo ka hortago caafimaaddaro ku timaado ilmaha uurka kujiro muhiimna u ah hooyo walboo uur leh inay qaadato fiitaminkan.
wuxuu kor uqaadaa difaaca jirka : wuxu qani kuyahay vitamin C oo ka qayb qaataa in waxyaalaha sunta ah jirka laga saaro .
sidoo kale waxa uu yareyaa Kalestrol-ka ama dufanka dhiiga.
Baamiyuhu wuxuu dhowraa caafimaadka Haraga (Maqaarka). Qalinkii:Dr faris.
Qodobkee dareenkaaga soo jiitay.
Akhriste waxaan rajaynayaa in aad wax badan ka faa’iiday qormadan, haddaba ha hilmaamin inaad uga faa’iidayso walaalaha iyo asxaabtaada kale #SHARE.
Previous articleDoorashadii ka dhacday dalka Iran ee lagu doortay Ebrahim Raisi iyo falcelinta Madaxda waddamada kale ee dunida.
Next articleDariiqa Gaadhidda Guusha